Inkqubo yoLawulo lweBhetri yeThermal yeBhasi yoMbane, kunye nomzi mveliso weQeqeshana nabenzi | SONGZ
I-JLE Series, ii-BTMS, uphahla lubekwe
I-BTMS (iBattery Thermal Management System) yebhetri yonke inemodyuli yokupholisa, imodyuli yokufudumeza, impompo, itanki lamanzi elandisiweyo, umbhobho wokudibanisa kunye nolawulo lombane. Umbane wokupholisa upholile (okanye ushushu) yimodyuli yokupholisa (okanye imodyuli yokufudumeza), kwaye isisombululo sokupholisa sijikelezwa kwinkqubo yokupholisa ibhetri yimpompo. Imodyuli yokupholisa ine-compressor yokuskrola yombane, isixhobo sokuhambisa amanzi esifanayo, isixhobo sokufudumeza ubushushu, ivalve yokwandiswa kwe-H kunye nefeni evuthayo. Imodyuli yokupholisa kunye nemodyuli yokufudumeza ziqhagamshelwe ngokuthe ngqo kuthotho kwipayipi yenkqubo, kwaye icandelo ngalinye lenkqubo yokujikeleza liqhagamshelwe ngombhobho wamanzi ashushu kunye nokudityaniswa kwendibaniselwano.
Ukucaciswa kobuchwephesha boMbane we-BTMS JLE Series:
Umthamo wokupholisa Umgangatho 6 kW I-8 kW
Ukujikeleza uMthamo wokuhamba kwamanzi 32 L / min (iNtloko ＞10m) 32 L / min (iNtloko ＞10m)
Ukuhamba komoya (Uxinzelelo lweZero) I-Condenser 2000 m3 / h 4000 m3 / h
Iyunithi Ubukhulu 1370x1030x280 (mm) 1370x1030x280 (mm)
Ubunzima 65 kg 67 kg
Igalelo lamandla 2kW 3.5kW
Isikhenkcisi Chwetheza R134a R134a
1. Ukusebenza: i-BTMS inokulinganisa kwaye ibeke esweni ubushushu bebhetri ngexesha lokwenyani ngenkqubo ye-BMS. Isantya sokupholisa kunye nokufudumeza ngokukhawuleza.
2. Ukonga umbane: imodyuli yefriji yenkqubo yolawulo lombane isebenzisa ubuchwephesha bolawulo lwetekhnoloji yokuqhubela phambili kunye nokusebenza ngokukuko kwe-DC yokuguqula isampuli se-compressor, emalunga ne-20% yokonga umbane kune-compressor yesiqhelo.
3. Ukukhuselwa kwendalo esingqongileyo: I-BTMS izimele, isebenzisa i-condenser ye-flow condenser kunye nesitshisi sokufudumeza ubushushu, esiqinisekisa ukuba intlawulo yefriji incinci.
4. Ukhuseleko oluphezulu: imveliso iyilelwe ukugquma kwamanqanaba amabini, uxinzelelo oluphezulu kunye nolusezantsi kunye nesixhobo sokukhusela uxinzelelo, esiqinisekisa ukhuseleko lokusetyenziswa kwemveliso.
5. Ukufakwa ngokulula: i-BTMS ayifuni ukwenza ifriji kwisiza, kwaye umzimba uqhagamshelwe ngemibhobho yamanzi ashushu ukufakwa ngokulula.
6.Ukuthembeka okuphezulu: inkqubo yolawulo isebenzisa itekhnoloji yolawulo lwe-microcomputer ye-single-chip, ekhulileyo nethembekileyo. Ubomi obude, ingxolo ephantsi, akukho sondlo, ubomi obude kune fan fan yebrashi, uyilo lwecompressor yeminyaka eyi-15, inqanaba lokungaphumeleli okuphantsi.
7. Umsebenzi we-PTC wokufudumeza, kubushushu obuphantsi, i-PTC yokufudumeza imbawula yombane, ukuqinisekisa ukuba iimveliso kwindawo ebandayo ziyakwazi ukusebenzisa.
Egqithileyo Isixhobo soMatshini soMbane soMbane soMbane ngeBhasi yoMbane oMbane
Okulandelayo: Isixhobo soMoya kwiMini nakwiMidi yeSixeko ngeBhasi okanye kwiBhasi yabakhenkethi